Doka finday tena izy avy amin'i Zapp360 | Martech Zone
Zapp360 dia manavao ny fomba fandefasana dokambarotra finday amin'ny mpanjifa amin'ny famolavolana sy ny fifandraisany. Ny dokam-barotra amin'ny finday nentim-paharazana dia mazàna amin'ny orinasa manao doka indray amin'ny dokam-barotra amin'ny birao - tsy dia natao firafitra, tsy voasokitra ary tsy manisy fiheverana ny fomba fandraisan'ny mpampiasa ny efijery kely.
Ny dokam-barotra amin'ny finday dia indostria $ 14.3 miliara ary ny vinavina rehetra dia hitombo hatrany izy io, saingy tsy hitranga izany raha tsy apetraka aloha sy afovoany ny traikefan'ny mpampiasa. Ka niverina i Zapp tamin'ny ho avy tamin'ny famoronana tarika doka horonan-taratasy izay handefa fifandraisana haingana sy haingam-pandeha araka ny hafainganan'ny mpampiasa… izay tena amin'ny fotoana tena izy.
Iray amin'ireo manavaka roa lehibe ny sehatra ny hafainganam-pandehan'ilay doka. Ny doka misy sary na sary dia mila fotoana hiarahan-dia, fa ny lahatsoratra dia tsotra ihany rehefa tonga. Ary raha jerena ny fomba fifandraisan'ny olona amin'ny alàlan'ny twitter amin'izao fotoana izao, ny lahatsoratra dia fitaovam-pifandraisana izay mijanona ara-potoana sy mifandraika amin'ny mpihaino hatraiza hatraiza.
The Zapp360 platform dia mandefa hafatra mikorisa tsy misy fanelingelenana mahatratra 140 tarehintsoratra tafiditra ao anaty tranokala finday na fampiharana an'ny mpanjifa amin'ny fotoana voatondro nataon'ny mpanao dokambarotra. Azon'ny mpanjifa atao ny mipaipaika ilay hafatra hamakivaky toerana iray, mametraka antso, mahita horonan-tsary, manavotra tapakila na miakatra amin'ny tranokalan'ny mpanao dokam-barotra. Ity haavon'ny haingam-pandraisana sy fifandraisana ity dia mitarika traikefa manankarena kokoa ary manome tahan'ny fiovam-po izay nihoatra ny salan'isan'ny indostria.
Ny sehatra Zapp360 izay mipetraka ao ambadiky ny doka dia mora ny manangana, mitantana ary mandrefy ny doka finday kendrena amin'ny fotoana tena izy (CTR sns) ka tsy miandry ny tatitra amin'ny faran'ny fampielezana ianao hahalalana raha mandeha na tsia na tsia.
Mora ny doka ho an'ny maso sy ny marika hametraka sy hanatanteraka. Ohatra: raha sendra misy vaovao tapaka, misy tranga iray, na miharatsy aza ny andro, ary mifandraika amin'izany toe-javatra izany ny vokatra na serivisin'izy ireo dia afaka mamaly eo noho eo izy ireo (na haingana araka izay azony atao. manaova doka pithy amin'ny tarehin-tsoratra 140 na latsaka).
Ny tena, Zapp360 dia sariaka ho an'ny mpampiasa ho an'ny mpitantana doka tahaka ny ho an'ny mpampiasa farany mijery ny doka. Eritrereto izany ho toy ny bitsika izay ahafahanao mihazakazaka pejy iray mifandraika amin'ny tranokala finday izay efa hitan'ny mpanjifa. Fampahalalana fohy miaraka amin'ny antso ho amin'ny hetsika any amin'ny toerana iray efa ataonao. Amin'ny dokambarotra finday amin'ny fotoana tena izy, ny mpivarotra dia afaka mitondra fifamatorana tsara sy manankarena kokoa eo amin'ny mpanjifa sy ny doka hitan'izy ireo, satria ara-potoana sy mifandraika kokoa izy ireo.
Tags: tambajotra doka findaydokam-barotra amin'ny findayamin'ny fotoana katrokazapp360
Antony 6 mety hividianana lisitra Prospect B2B na B2C